ईन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिन पूर्व प्रेमीले फोटो र म्यासेज फैलाएपछि स्वेताले गरिन देह`त्याग ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/ईन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिन पूर्व प्रेमीले फोटो र म्यासेज फैलाएपछि स्वेताले गरिन देह`त्याग !
विराटनगर । सोमबार इन्गेजमेन्टको तयारी विराटनगरमा भईरहेको थियो । उदयपुर बेलका नगरपालिका–२ निवासी २४ वर्षीया श्वेता पोखरेलले आइतबार साँझ झु ण्डिएर देह त्याग गरिन् । उनको देहत्याग नभएर देह`त्याग दुरुत्साहन भएको भन्दै परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि घ`टनाको भित्री पाटो बाहिर आएको छ । मृ`त ककी बहिनी सरीता पोखरेलको जाहेरीका आधारमा घट`ना घ`टाउन बाध्य पार्ने आरोपमा प्रहरीले सुन्दरहरैंचा–१० का सबिन पराजुलीलाई निय`न्त्रणमा लिईसकेको छ ।
विराटनगर–३ मा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी उनी सौर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रा.लि.मा काम गर्दै महेन्द्र मोरङमा अध्ययनरत थिइन् । त्यसै बेला बाबुआमाको सहमति अनुसार विराटनगर–३ का २८ वर्षीय युवक सँग उनको विवाहको टु`ङ्गो लागेको थियो । श्वेताले अकास्मात् यस्तो निर्णय लिनु`पर्ने पृष्ठ`भूमि कसरी तयार भयो त ?तीनवर्ष देखि उनी मोरङ सुन्दरहरैंचा–१० निवासी सविन पराजुली सँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । विवाह गर्नका लागि उनले आफ्ना प्रेमीसँग बारम्बार आ`ग्रह र अनुरोध गरिन् । दुवैजना महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर नै पढ्थे ।
तर, श्वे`ता सँगै जीवन बिताउने लक्ष्य नरा`खेका सबिनले उनीसँग त`त्काल विवाहको सह`मति दिन सकेनन् । त्यसपछि श्वेताले परिवारसँगको स`ल्लाहकै आधारमा दोस्रो केटा`सँग मागि विवाह गर्ने निचोड निका`लिन् र सोमबार फुलमाला र असार १४ गते विवाह बन्ध`नमा बाँ`धिने निर्णयमा दुवै परिवार पुग्यो । त्यसपछि, पूर्वप्रेमीले यो विषय थाहा पाए । उनले श्वे`ताको विवाह भाँड्ने निष्क`र्षका लागि पुराना आफू`सँगै बिताएका तस्वी`रहरु बाँड्न थाले । श्वे`ताको विवाह हुँदै गरेको घरसम्म बहिनी नातामा पर्ने युवतीबाट फोटो पुग्यो ।
विवाह तय गरेको दोस्रो के`टाले समेत श्वेता`लाई भनेका थिए–तिम्रो पहिलो प्रेमी सँग यतिधेरै माया साटि`ईसकेको रहेछ, अब विवाह नगरौं ! त्यसले श्वेतालाई देहत्याग गर्नुपर्ने निर्ण`यमा पुग्नु बाहेक वि`कल्प रहेन । कारण सबिन बनेपछि उनले आईतबार साँझ ६ बजे अन्तिम बाटो रोज्न बा`ध्य भईन् ।
श्रोत मिर`मिरे अन`लाइन